Sida loo Beddelaan DTS in AC3 Si fudud oo tayo weyn leh
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan DTS in AC3
Waa khibrad aad u weyn inaan u ciyaaro filimada MKV HD on a shaashadda TV weyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay ku ciyaaraan files MKV aad on your TV, sida Samsung ama LG smart TV. Taasi waa sababtoo ah files MKV waxaad la DTS audio, taas oo aan si la jaan qaada LG iyo Samsung TV iwm Xaaladdan oo kale, waxaad u leedahay in loogu badalo files MKV aad la DTS audio in MKV files leh AC3 audio.
Si loogu badalo DTS in AC3, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa habka ugu fudud ee aad u. Waa DTS MKV xirfadeed si Converter AC3. Sidaa daraadeed, si aad u AC3 badalo karaa DTS kaliya qasabno yar oo sahlan. Oo waxaad siinaysaa saamaynta saarka weyn, oo aan saamayn wax tayo audio & video files of MKV aad.
Tani tutorial tallaabo-tallaabo ku tusi doona sida ay u badalaan MKV DTS in AC3 on boosteejo Windows. Wixii uers Mac, hawlgalka waa la mid caadi ahayn, si aad sidoo kale gudbin karaan tutorial hoos.
1 Import MKV DTS files in this DTS in Converter AC3
Si aad u dajiyaan aad files MKV DTS in barnaamijkan, waxaad riixi kartaa "Add Files" badhanka xitaa your computer dooro files bartilmaameedka. Si kale oo fudud waa in si toos ah jiidi jeedi files MKV DTS ka your computer si daaqadan app ee. Ogsoonow in app this taageertaa diinta Dufcaddii.
2 qaab saarka Set
Tan kaliya aad u baahan tahay in la beddelo DTS audio in AC3 audio, weli waxaad badbaadin kartaa video files qaab MKV. Sidaas halkan, MKV xulo qaab sida wax soo saarka, laakiin dhigay AC3 sida codec audio ay.
Riix icon qaab on Murayaad Qaabka Output suuqa kala ah, ka dibna ay tagaan "qaab"> "Video"> "MKV". Ugu dambeyntii, tallaabada ugu muhiimsan waa in riix badhanka goobta hoose si ay u dejiyaan Encoder Audio sida AC-3.
Fiiro Gaar ah: Tani waxay si toos ah u bixisaa app users leh qaab filaayo in Samsung TV, LG TV, Sony TV iyo Panasonic TV. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files MKV on TV'yada, kuwaas oo, aad kula taliyay in ay si toos ah u doortaan qaab filaayo in aad TV. Sidaasi darteed waa inaad u tagtaa "Device"> "TV'yada" halkii, ka dibna dooro nooca TV aad.
3 Edit aad videos (Ikhtiyaar)
Tafatir videos haddii u baahan, sida miraha beeraha, jar, isku shaandheyn, ku dar saamayn, watermark, iyo iwm Cinwaan fudud riix "Edit" button in bar video shayga si ay u helaan qalab tafatirka aad rabto in aad ka.
4 Beddelaan DTS in AC3
Riix ah "Beddelaan" button in DTS bilaabaan in ay diinta ka AC3. App Tani dhameysan doono diinta video in daqiiqo. Haddii loo baahdo, waxaad u sheegi kartaa app this ordo ee asalka ah, si aad u samayn kartaa shaqooyinka kale ee la jeediya lahayn.
Marka uu sameeyo, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka by riixaya badhanka Folder Open hoose ee suuqa kala this. Hadda, kaliya wareejiyo files si aad TV for loo maqli karo.